Sidaana Waa Kajirtaa Aduunka Hadii Gandhihii Qurxoonaa Lagadhigay Bodyguard (Sawiro). - iftineducation.com
Labatan kan gabdho ee quruxda badan oo sexy-ga ah oo isugu yimid xeebta Hainan, China. Kuligood midba mida kale ka shidantahay. Ha umaleynin iney kujiraan fasax ama loo diyaarinaayo Model. Gabdhahaan aad u jeedo waxaa loo diyaarinaayaa tababar ah iney noqdaan Bodyguard.
gabdho bodyguad loo tababaraayo
Gabdhahaan aad u jeedo aqoontooda see u badan yihiin waa heer jaamacad, waxaa lasiinaaya tababar fisik adag aan ka liidan kan military-ga. Gabdhahaan aad ujeedo waa ladarbeynaa, lajirdila, biyahaa lagu kudkudaa, bush up aa la ciyaarsiinaa adag. Tababarkaan fisik oo soconaayo 4 isbuuc ayaa waxaa wada tababarayaasha shirkada Tianjiao Special Guard/Security Consultant Ltd.Co, Waa shirkad u tababarta gabdhaha si Bodyguard ahaan ee ugu horeysay China.
Intaan ka aheyn tababarkan fisik, qofwalbo oo ka qeybqaadanaayo tababarkaan wuxuu raacaayaa wax barasho 10 bilood oo loogu taba baraayo kor u qaadista awoodiisa ee kamid ah isdifaaca, kahortaga argagaxisnimada, iyo dishibilinka ganacsiga, Ka qeybqaatayaasha tababarkaan ee keena dhibcaha ugu wanaagsan ayaa waxaa loo diri doonaa International Security Academic ee Israel inow ku soo barto cilmi dheeri ah.
gabdho bodyguad loo diyaarinaayo
Horukaca dhaqaalaha China iyo tirade dadka qaniga ah oo kor usii kacaayo awgeed ayaa sababtay baahida Bodyguard. Xirfada shaqadaan oo noqotay fursada mushaarka ugu qaalisan, maba ku sii jirto hadow client-gooda yahay taajir.
bodyguard chinase girls
Client Badan aa jecel Bodyguad-ka gabdhaha marka la barbardhigo raga maxaa yeelay gabadha waxey ka qeybqadan karta iney kuu noqoto sekretari ama kalkaalisada canugaga. Lalama yaabaayo in baahida Bodyguard ka gabdhaha kor u si kici doonto. Mushaarkooda oo kasareeyo USD $ 100 maalinti. Sidaas ay tahay celceliska wax soo saarka ee China waa USD $1.500 sanadki cala qof.
Bodyguad Girls China
Korukaca dhaqaalaha China waxaa badan gabdhaha taajiriinta ah. Shaki kuma jiro ayagana iney dooranaaya Bodyguard gabar ah oo imaatinkeeda u keeneynin wax calama su’aal ah? hehe.
gabdho chinase bodyguad loo tababaraayo
china bodyguard girls
W/Q : Aden Abdi.
Baro Dalkaaga Hooyo – Bilic-Samida Soomaaliya